Ho tonga ao amin'ny Oscars i Buñuel avy amin'ny horonantsary mihetsika Espaniola | Famoronana an-tserasera
La mpamokatra ny sekoly kanto ESDIP ary talen'ny Salva Simó dia nanome aina an'i Buñuel tao amin'ny labyrint an'ny sokatra ary efa notsongaina ho an'ny Oscar izany. Fotoana fohy hifandraisana amin'ny sary mihetsika Espaniôla sy ny fomba fanekena azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Horonantsary notarihin'i Salvador Simó ary inona izany ny fampifanarahana sarimihetsika amin'ny tantara an-tsary mitovy anarana. Lohateny nosoratan'i Fermín Solís ary nametraka antsika tamin'izany fotoana izay nametrahan'i Buñuel ny sinema tsy azo antoka indrindra hisokafan'ny sosialy be indrindra.
Sarimihetsika efa ho any amin'ny Oscar amin'ny sokajy sarimihetsika asongadina ary izany dia vokatry ny asan'i Salva Simó sy i Manuel Cristobal niaraka tamin'ny orinasa mpamokatra ESDIP; sekolin-javakanto izay misy taranja samihafa mifandraika amin'ny famoronana sary toy ny fanoharana, sarimihetsika sarimihetsika ary maro hafa no ampianarina, ary manomboka eto dia manolo-kevitra ampahibemaso ho mpianatra azy aho amin'ny androny.
Ity sarimihetsika ity mamerina mamorona ilay fanadihadiana «Bu Huruel« Las Hurdes. Tany tsy misy mofo » ary efa miaraka amin'ny fankatoavana ny fankatoavana ny fetiben'ny sarimiaina iraisampirenena toa an'i Annecy a Los Angeles.
Maka anay ilay fanadihadiana hatramin'ny fotoan-dehibe teo amin'ny fiainan'i Buñuel izay andraisany fanapahan-kevitra handao ny tsy fitovizan-tena mba handeha amin'ny sinema ara-tsosialy kokoa. Lahatsary fanadihadiana izay anananay an'i Luis Buñuel ho mpilalao fototra ary ahafahana mankasitraka ny famoronana sy ny toe-tsain'ity talen'ny sarimihetsika kanto ity.
Uno ny tarehin-tsoratra Espaniola tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary fantany ny fomba hanehoana ny ampahany amin'ilay tena Espaniôla marina kokoa amin'ny sinema. Daty tsy azo ihodivirana amin'ny alin'ny Oscars raha mandeha tsara ny zava-drehetra ary tonga amin'ny gala farany. Ny vintana rehetra eto an-tany avy amin'ireto andalana ireto; Avelanay miaraka amin'i Bao ianao, izay nahazo ny Oscar fohifohy tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny horonantsary Espaniola an-tsary Buñuel ao amin'ny Labyrinth of the Turtles dia nisafidy ny lisitra Oscas